Izay milamina no afa-kandamina - ewa.mg
News - Izay milamina no afa-kandamina
Fanovana lalàmpanorenana? Izay
indray no hirahiraina amin’ny fitakian’ny mpanohitra sasany
amin’izao. Tsy vitan’izany, eo koa ny fampiakaram-peo hatrany ny
amin’ny tokony hialan’ny filohan’ny Repoblika. Miara-dalana
amin’izany ny fitambezoana ny fanarenana ny lafiny toekarena,
sosialy… Inona koa?
Tsy mahagaga, tsy vaovao… Tanisaina
avokoa izay lalana sy fomba mahaza-dratsy ny sasany hahazoana
fahafefam-panjakana; eny, na seza na akalana aza. Misy koa ny
mpanohitra hafa mifanohi-kevitra amin’izany: tsy mitaky fanovana
lalàmpanorenana na ny fialan’ny filohan’ny Repoblika fa
Izy samy mpanohitra aza, mifanipaka
sy mifanohitra an-toerana be ihany? Tsapatsapaina itsy sy iroa sao
mba misy iray mahavoa. Iza no ndeha ho azo amin’izany? Iza samy izy
aza, tsy miray loha. Tsy voatery hiray loha rehefa mikatsaka sy
miady tombontsoa? Ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny
Miova eny an-dalana izay hevitra
izay? Na fanararaotana izay heverina ho fahasahiranana, tsy
fahombiazan’ny mpitondra… Iraisan’ny mpanohitra amin’izao ny tsy
fahandrasan-tantana na ny fahataperan’ny fe-potoam-piasan’ny
mpitondra. Tsy andry izay fiatrehana fifidianana amin’ny
Tsy mahagaga, misy amin’ireo avoavo
ny tsy sahy miatrika fifidianana hatramin’izay fa ny hanao
hitsin-dalana amin’ny fanakorontanana hahazoana
fahafefam-panjakana. Izay niatrika fifidianana indray, tsy
nampanantena hanova lalàmpanorenana, raha voafidy. Inona ny hoe
fanoherana amin’izany rehetra izany?
Tsy misy afa-tsy ny fahazoana
fahefa-panjakana no zava-dehibe sy mahamaika fa resaka tian-kateza
ihany ny hoe fanarenam-pirenena, ny fitsinjovana ny
fiainam-bahoaka, ny fitiavan-tanindrazana… Tsy mahagaga raha tsy
mataky sy tofoka amin’ny afitsoky ny ankamaroan’ny mpanao politika
Ahoana ny hifandaminana amin’iza,
raha ny samy mpanohitra aza tsy mifandamina fa mitsapatsapa lava?
Izay milamina no afa-kandamina, izay matoky tena na azo itokisana,
izay mino amin’izay lazainy sy ataony no azo inoana…
L’article Izay milamina no afa-kandamina a été récupéré chez Newsmada.
Vohémar: zaza niampita arabe maty voafaokan’ny 4×4
Zazalahy kely iray vao roa taona monja no maty voafaokan’ny 4X4 ana sinoa mpandraharaha ao Vohémar ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 1 ora sy 30mn. Niampita arabe nanaraka ny reniny io zazalahy io tao amin’ny fokontanin’i Tanambao. Izy izay sady tsy hitan’ny reniny no tsy hitan’ilay mpamily ihany koa rehefa teny amin’ny arabe. Voafoaka tamin’izany ilay zaza ka maty tsy tra-drano. Taorian’izay, mbola nialana nenina teny amin’nny hopitaly iray tsy miankina ao an-toerana ilay zaza. Saingy tsy voavonjy intsony izy noho ny ratra mafy nahazo azy. Niatrika tanteraka ny adidiny ilay mpamily ary efa nanaovana fanadihadiana ka hatolotra ny fampanoavana rahampitso, hoy ny zandary, loharnom-baovao ao an-toerana. Henintsoa HaniL’article Vohémar: zaza niampita arabe maty voafaokan’ny 4×4 a été récupéré chez Newsmada.
Hazakazaka Bisikileta: azo anaovana fifaninanana ny lalam-pirenena RN 44
Hafaliana tsy omby tratra ny nandraisan’ny tany amin’ny Faritr’Alaotra-Mangoro, ireo orinasa roa, manatanteraka ny fanadihadiana ireo mponina manana fanànana( trano, tany, fotodrafitrasa) manamorona ny Lalampirenena faha-44 sy faha-3.A, amin’ny fanajariana ho rakotra tàra ireo làlana ireo. Nambaran’ireo mpanadihady fa isan’ny nohadihadin’izy ireo koa ny any amin’ny RN.3.A avy ao Vodiala, mandalo an’Amparafaravola, miafara any Andilamena. «Mahavelombolo ny ezaka tokony ho natao, nefa noho ny lalana ratsy dia tsy mety satria manimba fitaovana fotsiny, ka najanona”, hoy Razafimbola Jean Paul Léonard avy amin’ny Ligin’ny Hazakazaka am-bisikiletan’Alaotra-Mangoro, naneho ny hafaliany tamin’izao fahavitan’ny tetikasa goavana izao. Tsy fifaninanana manodidina ny farihin’Alaotra fotsiny no kasain’ingahy Leonard, hiantsoana ireo hatrany am-pitan-dranomasina, fa fitetezana ireo Disitrika dimy ao Alaotra-Mangoro dia Anosibe an’Ala, Moramanga, Amparafaravola, Andilamena ary Ambatondrazaka. «600km eo ho eo izay halavirana izay. Hatao dingana dimy, izay mirefy 120 km avy. Misokatra amin’ny rehetra ny fifaninanana ary antsoina hiara-hifarimbona avokoa”, hoy ny Mininisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahatena sy ireo Zanaka am-pielezana, ary ireo orinasa Ambatovy sy ny Kraoma ary ny Fanalamanga. Rarivo L’article Hazakazaka Bisikileta: azo anaovana fifaninanana ny lalam-pirenena RN 44 a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombona antoka: harindra ny ady amin’ny kere any atsimon’ny Nosy
Tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Nisy fivoriana manokana notarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, omaly, teny Mahazoarivo. Niarahana amin’ireo mpikambana vitsivitsy ao amin’ny governemanta sy ireo mpiara-miombon’antoka izany.Anton’ny fihaonana ny fandinihana ny momba ny zava-misy any atsimon’ny Nosy manoloana ny fiantraikan’ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny fomba hampandrosoana amin’ny fomba maharitra an’iny faritra iny. Tapaka tamin’ny fihaonana fa hohatsaraina ny fandrindrana ny asa rehetra momba ny any an-toerana na eo aza ny ezaka natao tao anatin’ny fiaraha-miasan’ny governemanta sy ireo mpiara-miombon’antoka. Niaraha-nahita fa tsy ampy ny rotsak’orana tamin’ity taona ity, araka ny nambaran’ny lehiben’ny governemanta. “Tsy afaka mionona amin’ny fomba hatramin’izay amin’ny alalan’ny tetikasa fohy ezaka fotsiny isika. Tsy maintsy mijery ny lavitra ezaka ihany koa. Tafiditra ao anatin’izany ny resaka rano, ny fambolena, ny fiompiana ary ny fotodrafitrasa mba hanatsarana ny tontolon’ny fampandrosoana any atsimo », hoy izy.Hanova ny tantara ny fanjakanaNaneho fisaorana ho an’ireo rehetra nandray anjara tamin’izao fivoriana izao ny praiminisitra. Tetikasa maro no nentin’ny governemanta nanampiana ireo any atsimo, niatrehana izany, araka ny nambarany. “Misy ny vola fanampiana noraisina avy amin’ny mpiara-miombon’antoka ary misy koa ny avy amin’ny kitapom-bolam-panjakana, ka tsy maintsy nifampiresahana ireo mpamatsy ireo ny fandrindrana izany. Hanova ny tantara sy ny endrika hampandrosoana ny any atsimo isika », hoy ihany izy.Synèse R.L’article Fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombona antoka: harindra ny ady amin’ny kere any atsimon’ny Nosy a été récupéré chez Newsmada.
UJSM : lany ho filoha Rasanda Serge
Rehefa tsy re feo tao anatin’ny taona maro, nitsangana indray ny fikambanan’ny mpanao gazety fanatanjahantena omaly. Lany ho filoha hitantana izany tamin’ny alalan’ny latsa-bato nataon’ireo mpanao gazety misahana io sehetra io Rasanda Serge. Efa an-taonany maro no nisehatra eo amin’io lafin’ny asa fanaovan-gazety fanatanjahantena io ny tenany ary izao hitantana ny fikambanana izao. Nohamafisin’ity filoha vaovao ity fa imasoany manokana ny hamelo-maso indray ny firaisankina eo amin’ny samy mpanao gazety ary koa hampivoarana hatrany ny mpikambana ao anatin’izany eo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena. Voafidy ho sekretera jeneraly kosa Ralaimidona Soafara. Miisa fito mianadahy ireo mpikambana ao anatin’ny kaomity mpitantana. Ankoatra izay, samy manana solontena iray avy ny gazety an-tsoratra, ny radio, ny fahitalavitra, ary ny « en-ligne ». Mandritra ny efa-taona ny iandraiketan’izy ireo ity kaomity mpitantana ny UJSM ity. Marihina fa zokiny indrindra amin’ireo fikambanana misy eo amin’io sehatr’asa io ny UJSM.Tsiferana R.L’article UJSM : lany ho filoha Rasanda Serge a été récupéré chez Newsmada.
Handraisana fepetra ireo sekoly tsy manome taratasy fiantsoana
Hijery akaiky an’ireo sekoly tsy miankina izay mety tsy hanome ny taratasy fiantsoana ho an’ny mpiadina ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Handraisana fepetra ireo sekoly tsy manome an’izany an’ireo mpiadina. Misy amin’ireo ray amandreny no mitaraina noho ny tsy fandoavana saram-pianarana, saingy tsy tonga mivantana any amin’ny Fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) na any amin’ny Ofisim-pirenena misahana ny sekoly tsy miankina (Onep). Nametraka laharana maitso ny minisiteran’ny Fanabeazampirenena raha manana olana mikasika ny taratasy fiantsoana 020 30 087 86. “Mandray fepetra amin’ilay sekoly izahay raha voaporofo ny fisian’io figiazana ny taratasy fiantsoan’ny mpiadina noho ny antony samihafa io. Afaka manatona eny amin’ny Cisco ireo manana olana”, hoy Ramananantony Lalaina, lehiben’ny Cisco Antananarivo renivohitra. Nilaza ny tsy mbola naharaisany fitarainana mikasika an’izany ihany koa ry zareo avy ao amin’ny Onep. “Isantaona misy foana izany fa hatreto aloha tsy mbola naheno fitarainana aloha izahay amin’ny Cepe. Tsy sakana ho an’ny fanomezana taratasy fiantsoana ny tsy fanefana saram-pianarana. Na izany aza sarotra be ihany ilay zava-misy ankehitriny. Ekena fa sahirana ireo ray aman-dreny fa safidiny ny hampiana-janaka amin’ny sekoly tsy miankina, izay efa fantatra fa mandoa saram-pianarana. Raha ohatra ka tsy vita ny adidiny, ohatra hoe folo volana na tamin’ity faramparany ity dia mety ho faty ilay sekoly raha izany”, hoy i Tsarasidy Marcellin, tale jeneralin’ny Onep. L’article Handraisana fepetra ireo sekoly tsy manome taratasy fiantsoana est apparu en premier sur AoRaha.